Xaqiiqada Degdega ah ee Tiknoolajiyadda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Helitaanka tooska ah ee amniga dijitaalka ayaa qaadaya marxaladda dhexe
Soo rar warbixin shaybaar biology ah. Soo dejiso oo akhri dukumenti taariikhi ah. Ku dhexjiro faallooyinka macallinka. Ku darso doodaha suugaanta internetka. Waxqabadyadani waa qayb ka mid ah barashada maalinlaha ah ee Minnetonka, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan macallimiin si wanaagsan loo tababaray iyo aalado farsamo oo si taxaddar leh loo xushay oo gacan ka geysanaya bixinta waxqabadka waxbarashada Iyada oo manhaj dijitaal ah iyo 120 barnaamij oo waxbarasho oo macno ahaan ah farta, ardaydeenu waxay baranayaan inay si qoto dheer u qotaan, u adeegsadaan aqoonta una xalliyaan dhibaatooyinka maado kasta - xisaabta illaa muusigga.
Barashadu si dhakhso leh ayey u socotaa, qayb ahaan maxaa yeelay macallimiintu waxay adeegsanayaan teknolojiyad si ay u qiimeeyaan barashada ardayga sida ugu dhow ee ay dhacdo. Jawaab celin degdeg ah, macallimiintu waxay dib-u-bari karaan ama u shaqsiyaysiin karaan waxyaabaha haddii loo baahdo, wayna sii socon karaan haddii qof kastaa fahmo.
Saxeex Keliya: Helitaanka sugan ee ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha
Wadashaqeynta xasaasiga ah ee udhaxeysa ardayda, qoysaska, macalimiinta iyo shaqaalaha waxaa dardar galinaya xalka cusub ee hal-abuurka (SSO) ee Minnetonka: helitaanka lambarka sirta ah ee buugaagta, barnaamijyada, jadwalka taariikhda, shaqooyinka, qalabka taageerada, wararka fasalka, fasalada iyo waxyaabo kale oo badan. Kadib saxiixa kadib, qoysaska mashquulka ah waxay dib u eegi karaan (oo xoojin karaan) rajooyinka laga qabo carruurta oo dhan waxayna bilaabi karaan wadahadal haddii loo baahdo caawimaad ama faragelinta dugsiga. Waxtarka hal-ku-qorid ayaa u fiican ardayda iyo macallimiinta, sidoo kale, keydinta in ka badan 4,500 saacadood oo wax barasho sanadkiiba. Macallimiintu waqti yar ayey ku lumiyaan maareynta erayga sirta ah ee ardayda, ardayduna aad uma niyad jabaan inay sugaan galitaanno badan.
Darajada A amniga kaabayaasha teknoolojiyadda ee Degmada
Iyadoo ay ka badan yihiin 10,000 koonto isticmaaleyaal ah oo ay leeyihiin carruur aan qaan-gaar ahayn, amniga nidaamka ayaa mudnaan sare u leh kooxda tikniyoolajiyadda Degmada. Nidaam xisaabeed dhow oo ay sameysay FRSecure ayaa siiyay Minnetonka qiimeyn A amniga shabakada. Anaga oo kala shaandheeyna waxa ka soo gala emailka, shabakadaha xun xun, iyo haakooyinka kale ee qaawan, waxaan ka ilaalin karnaa caruurta waxyaabaha aan habooneyn ee laga heli karo Webka. Iyadoo shaandheyn la xoojiyay, dhammaan aaladaha Degmadu waxay mamnuucayaan goobaha aan habboonayn iyadoon loo eegin haddii qalabku ka socdo ama ka baxsan yahay xerada. Dhammaan barnaamijyada Degmooyinka waxaa lagu qiimeeyaa da'da 13 ama ka yar, Dukaanka App-ka waxaa lagu xukumaa barnaamijyada ay ansaxisay Degmada oo keliya. Macallimiintu sidoo kale waxay ku dhiirrigeliyaan qoysaska inay isticmaalaan miirayaal isku mid ah (sida OpenDNS.com) oo ay xaddidaad u sameeyaan carruurta isticmaala kombiyuutarada guriga, shabakadaha WiFi ama taleefanka gacanta ee gaarka ah.
Horumarinta hal abuureyaal mas'uul ah iyo macaamiisha tikniyoolajiyadda
Si looga caawiyo ardayda inay fahmaan masuuliyada ka saaran isticmaalka saxda ah ee tikniyoolajiyadda - waxaan ugu yeerno Dijital Caafimaadka iyo Fayo-qabka —Minnetonka wuxuu gudbinayaa manhaj ku habboon fasalka sida Warbaahinta 'Common Sense Media' si loogu hago ardayda sida loo sameeyo xulashooyinka wanaagsan, loo aqoonsado waxyaabaha aan habboonayn iyo ka hortagga xoog u sheegashada internetka . Ardayda waxaa sidoo kale la xasuusiyaa joogtaynta iyo raadinta raadkooda dhijitaalka ah iyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed.